theZOMI: [mrsorcerer:37803] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] အချစ်ဆိုတာ အနုပညာတစ်မျိုး၊ ခွင့်လွတ်ခြင်းက အချစ်ရဲ့ကျောရိုး
[mrsorcerer:37803] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] အချစ်ဆိုတာ အနုပညာတစ်မျိုး၊ ခွင့်လွတ်ခြင်းက အချစ်ရဲ့ကျောရိုး
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] အချစ်ဆိုတာ အနုပညာတစ်မျိုး၊ ခွင့်လွတ်ခြင်းက အချစ်ရဲ့ကျောရိုး
Shwe Eaim Si and ချစ်သူဖတ်ဖို့အချစ်စာမျက်နှာ sharedရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည်'s photo.
သူငယ်ချင်းရေ..ကျမ ကပုံပြောတတ်သူမလို့ ..အချစ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ နားလည်သည်းခံမှုလေးတွေ ကိုစံနမူနာယူရအောင်နော်
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ ဆင်းရဲသား လင်မယားနှစ်ဦးရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့ဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲက တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ မြင်းကိုရောင်းပြီး လိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အဘိုးအိုက ဈေးထဲမှာ မြင်းကို နွားတစ်ကောင်နဲ့ လဲလိုက်တယ်။
ခဏနေတော့ အဘိုးအိုက နွားကို ဆိတ်နဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်။
ဆိတ်ကို ငန်းနဲ့ ငန်းကိုကြက်နဲ့ ကြက်ကို ပန်းသီးတွေနဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်။
အဘိုးအိုက ပစ္စည်းတစ်ခုကနေ တစ်ခုလဲနေရခြင်း အကြောင်းရင်းက ....အဘွားအိုကို အံသြမှုတွေ ပေးချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
"ဟာ… ကျုပ်တို့ နွားနို့သောက်ရပြီပေါ့"
"အင်း… ဆိတ်နို့လည်း မဆိုးပါဘူး"
"အော်… ငန်းမွေးတွေက သိပ်လှတာ"
"အင်း… ကျုပ်တို့ ကြက်ဥစားရပြီပေါ့"
စတာတွေ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး အဘိုးအိုက သူလဲလာတဲ့ ပန်းသီးကိုပြတော့ အဘွားအိုက စိတ်ပျက်သွားပုံ မပြဘဲ
" အင်း.. ဒီည ကျုပ်တို့ ပန်းသီးကိတ် လုပ်စားကြတာပေါ့" လို့ ပြောပြီး အဘိုးအိုကို အားရပါးရ နမ်းလိုက်တော့တယ်။
ပုံပြင်ကို ဖတ်စက သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ စာရေးဆရာက တုံးအတဲ့ ဆင်းရဲသား လင်မယားကို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ထားတာလား? ဒါမှမဟုတ် လောင်းကြေးငွေတွေ အနိုင်ရအောင် ဇာတ်တိုက်ထားတာလားလို့ တွေးခဲ့မိတယ်။
တကယ်တော့ ပုံပြင်က အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ခွင့်လွတ်သည်းခံခြင်း၊ လေးစားယုံကြည်ခြင်းကို ပြချင်တာပဲဖြစ်တယ်။
အချစ်ဆိုတာ အနုပညာတစ်မျိုးခွင့်လွတ်ခြင်းက အချစ်ရဲ့ ကျောရိုးတဲ့
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/05/2013 11:59:00 AM